Magacyada iyo beelaha ay kasoo jeedaan xildhibaanada cusub ee HIRSHABELLE
AKHRISO:- Liiska Xubnaha Aqalka sare ee Puntland & Beelaha ay ka soo jeedaan
Xildhibaanada golaha deegaanka Gaalkacyo oo lagu dhawaaqay
Liiska xildhibaanada Labada Aqal ee Puntland
These cookies do not store any personal information. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Wafdiga Xildhibaanadu waxey kulamo gaar gaar ah la qaateen Madaxweynaha Galmudug, Madaxweyne ku-xigeenka, Gudoomiyaha Barlamaanka iyo labada ku-xigeen. Sidoo kale Xildhibaanadu waxey kulamo gaar ah la yeesheen odoyaasha dhaqanka Galmudug iyo qeybaha kale ee bulshada, kuwaasoo dareen iyo walaac ka muujiyey isqabqabsiga siyaasadeed ee hogaanka sare Galmudug ka soo ifbaxday, ayagoo ku taliyey in maamulka la heshiisiiyo, muujiyena in aysan aqbali karin qalalaase siyaasadeed oo dibadda laga soo abaabulay.
Kadib wada hadalo dheer oo aan la yeelay dhinacyada khilaafku u dhaxeeyo waxaan ku guuleysanay marka hore in aan isoo horfariisano hogaanka u sareeya Galmudug, iyaga oo iskaga garaabay tabashooyinkii shaqsiyadeed ee ka dhaxeeyay mudadii ay wada shaqeynayeen. Intaas kadib, waxaan dadaal dheer ku bixinay sidii xal kama danbeys ah loogu heli lahaa is afgarawaaga ka dhashay kala aragti duwanaansho madadxa Galmudug ee dhanka maamulka iyo siyaasadda. Waxaankacodsanaylabadadhinacinaynootalodhiibtaan,siaanxalugawada gaarno khilaafkooda siyaasadeed iyo midka maamulba.
Iyaga oo soo abaabulay murashax madaxweyne oo lagu maalgeliyay hantidii qaranka, isla markaana ciidamadii qaranku ilaalinayaan, taasoo wiiqeysa kalsnoonida iyo wada shaqeynta Dowlada Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Galmudug.
Taas oo horseedi karta burbur iyo xasilooni daro ku timaada Maamulka iyo deegaaada Galmudug. Waxaan uga digeynaa Xukuumada Soomaaliya in faragelin ay ku sameyso maamulka Galmudug, isla markaana ay soo saaraan waraaqo aan ka turjumayn xaqiiqada jirta. Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan Dowlad Goboleedyada Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in ay dadaal ku bixiyaan isu soo dhaweynta iyo xalinta khilaafka u dhaxeeya madaxda Galmudug. Sidoo kale in ay hor istaagaan isu day kasta oo lagu cuuryaaminayo nidaamka ku dhisan federaalka ee ka hana qaaday Soomaaliya.
Beesha caalamka waxaan ugu baaqeynaa inay gargaar deg deg ah lasoo gaarto dadka abaartu halakeysay ee deegaanada Galmudug. Wabillaahi Tawfiiq.
Waxaa inoo cadaatay in isku daygii xilka qaadista Madaxweynaha Galmudug lagu qabtay hotel u kireysan Murashaxaasi, aysana shir gudoomin Gudoomiyihii Barlamaanka iyo ku xigeenadiisii. Taas oo horseedi karta burbur iyo xasilooni daro ku timaada Maamulka iyo deegaaada Galmudug.
Waxaan uga digeynaa Xukuumada Soomaaliya in faragelin ay ku sameyso maamulka Galmudug, isla markaana ay soo saaraan waraaqo aan ka turjumayn xaqiiqada jirta. Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan Dowlad Goboleedyada Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in ay dadaal ku bixiyaan isu soo dhaweynta iyo xalinta khilaafka u dhaxeeya madaxda Galmudug.
Sidoo kale in ay hor istaagaan isu day kasta oo lagu cuuryaaminayo nidaamka ku dhisan federaalka ee ka hana qaaday Soomaaliya. Beesha caalamka waxaan ugu baaqeynaa inay gargaar deg deg ah lasoo gaarto dadka abaartu halakeysay ee deegaanada Galmudug.
Posted in Xildhibaanada dowlada federaalka iyo qabiilada 2017
thoughts on “Xildhibaanada dowlada federaalka iyo qabiilada 2017”
23.09.2021 at 00:16